တရုတ်နိုင်ငံ၌ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုလုပ်သူများအား အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းရန်စီစဉ် - Xinhua News Agency
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတိုက်ဖျက်ရေး အရှိန်မြှင့်တင်ရန် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြု လုပ်သူများအတွက် အ
မည်ပျက်စာရင်းတစ်ခုကို တရုတ်အာဏာပိုင်များက အစပျိုးလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပြုလုပ်သူများ ၏ ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းများ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီမှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ရန် သုတေသနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပြည်သူသို့ ချပြခဲ့သည့် စာတမ်းအရသိရသည်။
ယင်းစာတမ်းအား တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ စည်းကမ်းစစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မရှင်နှင့် အမျိုးသားကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် တို့အပြင် ပါတီဌာနများနှင့် ထိပ်တန်းတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကို လာဘ်စားသူများနှင့် လာဘ်ပေးသူများ နှစ်ဘက်လုံးကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပုံစံအမျိုးမျိုး ကျူးလွန်သူများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြီးမားသော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု သို့မဟုတ် လူအမြောက်အများ၊ ပါတီဝင်များနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လာဘ်ပေးခြင်း၊ အရေးကြီးနေရာများ၊ နယ်ပယ်များတွင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကို အဓိကထားစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းညွှန်ချက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုမှ ရရှိသော တရားမဝင်အကျိုးစီးပွားများအား ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူခြင်း၊ ဥပဒေအရ ပြန်လည်ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်ထံပြန်အပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆုတံဆိပ်များ၊ နိုင်ငံရေးဂုဏ်ထူးများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပညာရေးဘွဲ့များကဲ့သို့သော အခြားမလျော်ကန်သည့်အကျိုးစီးပွားများကိုလည်း ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများအား အပြစ်ပေးနေစဉ်အတွင်း အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် တရားဝင်လည်ပတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ တရားဝင်အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများအား အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း စာတမ်းကဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 8 (Xinhua) — Chinese authorities will introduceablacklist system for bribers to intensify the fight against corruption, according toaguideline.
Research shall be carried out to put in place punishments regarding bribers’ market access and qualification restrictions, says the document made public Wednesday.
The document was jointly formulated by the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China and the National Supervisory Commission, as well asaseries of Party departments and top judicial authorities.
Stressing that punishment shall be given to both those who take bribes and those who offer them, the guideline specifies the investigation will focus on those committing multiple bribery, huge bribery or bribery to many people; Party members and state employees offering bribes; bribery in key areas and fields; and major commercial bribery.
It asks for measures to ensure that illegal interests obtained from bribery shall be confiscated, recovered, or restituted according to law; and that other improper interests obtained, such as professional titles, political honors, business qualifications and academic degrees, shall be canceled or revoked.
While punishing bribers, authorities shall also fully protect the legitimate rights and interests of the persons and enterprises involved to ensure the legitimate operation of enterprises, says the document. Enditem
လာအိုနိုင်ငံက COVID-19 ရောဂါအတွက် ဆေးဖက်ဝင်ပရဆေးများအား ဆေးတောင့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန်ရှိ